Itoophiyaa: ‘Filannoo biyyaaleessaa haalduree ittisa Covid-19 guutuun gaggessuun ni danda’ama’–Ministeera Fayyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsItoophiyaa: ‘Filannoo biyyaaleessaa haalduree ittisa Covid-19 guutuun gaggessuun ni danda’ama’–Ministeera Fayyaa
Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa kana dura sababii Covid-19tiin yeroo hinhimurtoofneetti dabarfamee ture, haaldureewwan ittisa dhibee kanaa guutuun adeemsisuun akka danda’amu Ministeerri Fayyaa hime.
(afaanoromoo)—Manni maree bakka bu’oota uummataa Itoophiyaa gabaasa Ministeerri Fayyaa deebii weerara dhibee Covid-19 fi tarkaanfilee gara fulduraa ilaalchisuun dhiyeesse irratti mari’achaa jira.
Gabaasa ministeerichaa Dr. Liyaa Taaddasa dhiyeessaniin, weerarri dhibee Covid-19 ammallee yaaddoo fayyaa ta’us akkaataa duraan itti tilmaamamee tureen olaanaa akka hin taane himaniiru.
Kana malees dhibeen Covid-19 yeroo dheeraaf turuu kan danda’u ta’uu isaafi facca’iinsa dhibichaa irrattis ragaa fooyyee akka qaban himuun filannichi haldureewwan ofeeggannoo taasisuun adeemsifamuu akka danda’u gabaasa isaaniin himaniiru.
Kanaafuu, “naamusa, dambiifi qajeelfama filannoo ittisa dhibee Covid-19 bu’ureeffate qopheessun sadarkaa hundatti qophii taasisuun gara hojiitti seenuun ni barbaachisa” jedhan.
Itti dabaluunis ”adeemsa kana keessattis iddoowwan tokko tokkotti weerarri olaanaa yoo mudate haala adda ta’en ilaallamuu akka danda’au ilaalcha keessa galchuun qophaa’un ni barbaachisa,” jedhaniiru.
Dr Liyaa weerarri koronaavaayirasii wayita ammmaatti biyyattii keessatti naannoolee hunda keessa faca’u himuun, namoota koronaavaayirasiin irratti argame keessaa parsantaa 95 kan ta’an kanneen seenaa imalaa hin qabneedha jedhaniiru.
Qorannoo hanaga ammaatti gaggeefameenis namoota 66,200 irratti vaayirasichi argamanuun kan mirkanaa’ee yoo ta’u, kanneen 1,045 ta’an ammo dhibee kanaan du’unsaanii himameera.
Sadarkaa ammaatti weeraricha hirrisuun danda’amuu baatulleen adeemsa ittisa duraafi tatamsa’ina isaa hir’isuuf sadarkaa hundattuu dandeettii cimsachuun akka danda’amee himan.
Kanaan dura weerara koronaavaayirasiif jecha filannoon biyyaalessaa 2012 yeroo qabameetti akka hin gaggeeffamne Boordiin Filannoo Biyyaalessaa ture kan beeksise.
Sababii weerara koronaavaayirasiitiin walqabatee haala uumame irraa ka’uun, filannoon bara kanaa yeroo qabameef keessatti gaggeessuu kan hin dandeenye ta’uu, Boordichi beeksisee ture.
Baatiiwwan Bitooteessaafi Eblaa keessa hojiiwwan haalduree filannoo raawwatamu qaban hedduu akka tureefi sababii taatee koronaa addunyaafi biyyattii mudateen kan raawwachuu hin dandeenye ta’uu yeroo sana Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf dhiiyeesse.
Kun ammoo barri aangoo mootummaa kun waan dhumatuuf filannoon hin gaggeeffamiin hafuun gaaffii Heeraa kaasuun dubbii ijoo siyaasaa ta’ee ture.
Qaawwa gama Heera mootummaatiin uumameefis yaadni furmaataa paartilee siyaasaa gara garaarraa dhiyaataa tureera.
Kanarraa ka’uun, Manni Maree Bakka bu’oota Ummataas hiikkaa Heera mootummaatiin akka fala argatuuf Mana Maree Federeeshiniif dabarse. Manni Maree Federesshiniss mootummaan aangoorra jiru hanga filannoo dhufuutti akka gaggeessu murteesseera.
Duraanuu Paartii Badhaadhinaa kan biyya bulchaa jirutti makamuu kan dide TPLF ammoo murtee Mana Maree Federeeshinii kan mormuun akka naannootti Fulbaana 9, 2020 filannoo gaggeeffachuun isaa ni yaadatama.
Dukkubni biyya shororkeessaa jiru garee PP ofiin jedhu dha. Hanga PPn angoo irra jirtutti filannoo nagaan gaggeeffamuu fi nagaan waaraa dhufuu hin dandahu!